Fibromyalgia | Ndụmọdụ - Ihe kpatara - Ọrịa - Ọgwụ - Mmega & Mmega ahụ
Fibromyalgia bụ ọnọdụ ọrịa na-egosipụta nke mgbu na-adịghị ala ala, nke na-agbasasị ike na mmụba nke nrụgide anụ ahụ na akwara. Fibromyalgia bụ ọnọdụ arụ ọrụ. Ọ bụkwa ihe zuru oke nye onye ahụ ịta ahụhụ site na ike ọgwụgwụ, nsogbu ihi ụra na nsogbu ncheta.
Mgbaàmà nwere ike ịdị iche iche nke ukwuu, mana njirimara njirimara bụ ihe mgbu dị ukwuu na mgbu na-ere ọkụ na akwara, njikọta akwara na gburugburu nkwonkwo. Ekepụtara ya dịka otu adụ akwara ụkwara.
Amaghi ihe kpatara fibromyalgia, mana ihe omumu emere na nso nso a egosiputara na o nwere ike ibu epigenetics na nkpuru okike ndi na ebute bụ ụrụ na ụbụrụ. A na-eme atụmatụ na ihe dị ka 100000 ma ọ bụ karịa nwere nsogbu fibromyalgia na Norway - dị ka ọnụ ọgụgụ sitere na Norwegian Fibromyalgia Association.
Ọzọkwa pịgharịa gaa na ederede maka lelee vidiyo ọzụzụ emere maka ndị nwere ọrịa fibromyalgia.
E kwesiri itinyekwu uche na nyocha nke metụtara ọnọdụ na-emetụta ọtụtụ ndị - ya mere anyi ji agba gi ume ikesaa ederede a na igwe mgbasa ozi, ọkacha mma site na ibe Facebook anyị wee sị: "Ee ka nyocha ọzọ gbasara fibromyalgia". N'ụzọ dị otu a, mmadụ nwere ike ime 'ọrịa a na-adịghị ahụ anya'.
Ọzọkwa gụ: - 6 Ihe omume maka ndi nwere Fibromyalgia
Fibromyalgia - nkọwa
Fibromyalgia sitere na Latin. Ebe enwere ike iji nsị fibrous tụgharịa 'fibro' na anụ ahụ nwere njikọ (ihe jikọrọ ọnụ) yana 'myalgia' na mgbu mgbu. Nkọwa nke fibromyalgia si otú a ghọọ 'mọzụlụ na mgbu anụ ahụ'.
Nye na-emetụta fibromyalgia?
Fibromyalgia na-emetakarị ụmụ nwanyị. E nwere usoro 7: 1 n'etiti ụmụ nwanyị metụtara na ụmụ nwoke - nke pụtara na okpukpu asaa ka ụmụ nwanyị metụtara karịa ụmụ nwoke.
Kedu ihe na - akpata fibromyalgia?
Yet maghị kpọmkwem ihe kpatara fibromyalgia, mana ị nwere ọtụtụ echiche na ihe ndị nwere ike ibute gị.
Jenetik / Epigenetics: Mmụta enyerela ihe akaebe na fibromyalgia na-adịgidekarị n'ezinụlọ / ezinụlọ, a hụkwara na mmetụta mpụga dịka nchekasị, trauma na ọrịa nwere ike ibute nchọpụta fibromyalgia.
- Azịza nke fibromyalgia bụ ihe omimi na mkpụrụ ndụ ihe nketa anyị?
Nsogbu / mmerụ ahụ / ọrịa: Azọwo ya na fibromyalgia nwere ike inwe mmekọrịta na ụfọdụ ọnya ma ọ bụ nchọpụta ọrịa. Mgbu mgbu, Arnold-Chiari, sterosis cervical, larynx, mycoplasma, lupus, nje Epstein Barr na ọrịa akụkụ okuku ume ka atọrọla ka enwere ike ibute fibromyalgia.
Ọzọkwa gụ: - Fibromyalgia Nwere Ike Duebụ Na-agbagha Na Brain
Kedu ụdị mgbaàmà fibromyalgia?
Nnukwu ihe mgbu na njirimara njiri mara dịka isi ike, ike ọgwụgwụ / ike ọgwụgwụ, ụra na-adịghị mma, enweghị ike, isi ọwụwa, isi ọwụwa na afọ.
Dịka e kwuru, enwerekwa akụkọ na ndị mmadụ na-arịa fibromyalgia na-enwekarị nsogbu nke ncheta, ọrịa ụkwụ na-enweghị nsogbu, ụda na nghọta ọkụ, yana ụfọdụ mgbaàmà akwara ozi. Nchọpụta ahụ na-ejikọkarị ya na ịda mbà n'obi, nchekasị na nkwụghachi azụ post-traumatic stress syndrome.
Kedu otu esi achọpụta ọrịa fibromyalgia?
N’oge gara aga, emere nchọpụta ahụ site n’inyocha ihe dị iche iche 18 n’ahụ, mana ugbu a, a tụfuola usoro a. Na ndabere nke na enweghi nnwale nnwale ọhụhụ, ọ dabere na mwepu nke ọrịa ndị ọzọ yana dabere na njiri mara / akara akara.
Nchoputa ya na akpịrị isi n'ahụ?
Nnyocha e mere n'oge na-adịbeghị anya, nke e bipụtara na Journal of Clinical Rheumatology (Katz et al, 2007), jụrụ nkwupụta nke isi ihe dị ka njirimara nyocha, ebe ha kwubiri na ọtụtụ mmadụ na-enwekwa ọnya na isi ihe ndị a. Ọ na-kweere na ọtụtụ na-akọwahie oke mgbu myofascial dị ka fibromyalgia.
Ọgwụgwọ fibromyalgia bụ ihe dị mgbagwoju anya. Nke a bụ n'ihi na ọnọdụ ahụ na-agbanwe agbanwe n'etiti ndị mmadụ ma na-ejikọtakarị ya na ọtụtụ ọnọdụ ndị ọzọ. Ọgwụgwọ nwere ike ịgụnye ị medicationụ ọgwụ, mgbanwe ndụ, ọgwụgwọ anụ ahụ na ọgwụgwọ mmụọ - na-abụkarị usoro ịdọ aka na ntị.
Peoplefọdụ ndị na-enwe ahụmịhe na mgbaàmà fibromyalgia ha site na ime mgbanwe na nri ha. Nke a nwere ike ịgụnye izere, dịka ọmụmaatụ, mmanya, ngwaahịa mmiri ara ehi na / ma ọ bụ gluten.
Ọ bara uru nke ukwuu nye onye nwere ọrịa fibromyalgia ma nweta enyemaka n'ịchọpụta mmega ahụ kachasị mma maka ha. Onye na-ahụ maka anụ ahụ nwekwara ike ịgwọ ọnya na -eche olu.
Chiropractic na ọgwụgwọ nkwonkwo
Nkwonkwo na ọgwụgwọ anụ ahụ nwere ike belata akwara na mgbu nkwonkwo. Onye chiropractor nke oge a na-elekọta akwara na nkwonkwo, ọ pụkwara, dị ka kọntaktị mbụ, inye aka na ntinye ọ bụla ma ọ bụ ihe yiri ya.
Mmetụta mmetụta na-adịghị ala ala na mgbaàmà fibromyalgia. Nsonaazụ ahụ pere mpe ma ọ bụrụ na ejiri naanị usoro ọgụgụ isi na-eji ya eme ihe, mana ọ ga-enwe mmetụta dị ukwuu ma ọ bụrụ na ejikọtara ya na usoro ọgwụgwọ ndị ọzọ.
Agehịa aka na ọgwụgwọ anụ ahụ
Ọrụ olu na ịhịa aka n'ahụ nwere ike ịnwe mmetụta na-eme ka ihe mgbapụta na akwara ike na ọnya ike. Ọ na - eme ka mgbasa ọbara gbasaa na mpaghara anụ ahụ na - egbu anụ ma na - agbaze n’ime eriri anụ ahụ siri ike - ọ nwekwara ike inye aka wepu ụda na ihe ndị yiri ya.
Acupuncture na ọgwụ agịga ahụ egosipụtala mmetụta dị mma na ọgwụgwọ na mgbu n'ihi fibromyalgia.
iku ume omume
Usoro iku ume nke oma na iku ume omume Kedu nke nwere ike belata nrụgide na nchekasị nwere ike inye aka belata mgbaàmà.
Mmega ahụ / mmega ahụ maka ndị nwere fibromyalgia
Mmega ahụ na mmega ahụ nwere ike ime ka ọ dịkwuo mma ma ọ bụ hie ụra nke onye ahụ. E jikọta ya na mbido mgbu na ike ọgwụgwụ. Nnyocha e mere egosiwo na ọzụzụ obi na mmega ahụ ọkachasị dị ka ọ kachasị dị mma maka ndị fibromyalgia metụtara. N'okpuru bụ ọmụmaatụ nke usoro ọzụzụ:
N'ebe a, ị hụrụ usoro mmegharị ahụ dị mma ise a na-emegharị maka ndị nwere fibromyalgia. Ndị a nwere ike inyere gị aka iwelata mgbu akwara na nkwonkwo siri ike. Pịa n'okpuru ka ị hụ ha.
Soro ezinụlọ anyị sonye ma denye aha ọwa anyị (pịa ebe a) - ma soro ibe anyị na FB kwa ụbọchị, ndụmọdụ ahụike na mmemme mmega ahụ nwere ike inyere gị aka ịme ahụike ka mma.
Ọkụ mmiri / ọzụzụ ọdọ mmiri
Ọzụzụ mmiri ọkụ / ọdọ mmiri egosila na ọ nwere ike ịrụ ọrụ nke ọma ma a bịa n'ihe enyemaka maka mgbapụta na arụmọrụ ọrụ - nke a bụ n'ihi na ọ na - agwakọta ọzụzụ nke cardio na ọzụzụ iguzogide.
Ọzọkwa gụ: - 3 Omume Na-eku ume Na-emegide Nsogbu
Kedụ ka m ga - eme fibromyalgia
- Bie ahụ ike ma na-emega ahụ oge niile (n'etiti oke gị)
- Chọọ ọdịmma ma zere nrụgide na ndụ kwa ụbọchị
- Nọrọ n ’ezi anụ ahụ mmemme mmeghari ahụ maka ndị nwere ọrịa fibromyalgia
- LDN (naltroxen dị ala)
A chịkọtara onyonyo nke CureTo ọnụ ma gosipụta nnyocha dị omimi banyere ọgwụgwọ na arụmọrụ ha kọrọ na ọgwụgwọ fibromyalgia. Dịka anyị na-ahụ, akara LDN dị oke elu.
Gụkwuo: Zọ 7 LDN Nwere Ike Inye Aka Megide Fibromyalgia
Nwere onwe gị ịkekọrịta na mgbasa ozi mmekọrịta
Ọzọ, anyị chọrọ rịọ nke ọma ka ị kee isiokwu a na mgbasa ozi ma ọ bụ na blọgụ gị (biko jikọta ya na isiokwu ahụ). Ingghọta na ịbawanye eleba anya bụ ụzọ mbụ ga - esi adị ndụ kwa ụbọchị kachasị mma maka ndị ọrịa mgbu na-ala ala, rheumatism na fibromyalgia metụtara.
Nke a bụ otu ị ga - esi nyere aka ịlụ ọgụ mgbu na - adịghị ala ma kwado ya:
Nhọrọ A: Soro na FB ozugbo - Detuo adresị websaịtị ahụ ma mịnye ya na peeji nke facebook gị ma ọ bụ na otu ihe metụtara facebook ị nọ na ya. Ma ọ bụ, pịa bọtịnụ “kekọrịta” dị n'okpuru ka ịkekọrịta post ọzọ na facebook gị.
Emetụ nke a iji kesaa n'ihu. Nnukwu ekele diri onye ọ bụla na - enyere aka ịbawanyewanye nghọta banyere fibromyalgia na ọrịa mgbu na - adịghị ala ala!
Nke B: Jikọọ aka na ederede na blog gị ma ọ bụ weebụsaịtị.
Nke CH: Soro na nha Peeji Facebook anyị
Peeji ọzọ: - Ihe mgbu akwara 18 a nwere ike ịkọ ma ọ bụrụ na ị nwere Fibromyalgia
Pịa n’elu ka ị gaba n’ihu na peeji na-esonụ.
Robert S. Katz, MD na Joel A. Block, MD. Fibromyalgia: Nwelite na usoro na njikwa. Akwụkwọ bụ Clinical Rheumatology: Mpịakọta 13 (2) Eprel 2007pp 102-109
Ihe onyonyo: Creative Commons 2.0, Wikimedia, WikiFoundry
Ajụjụ a na-ajụkarị gbasara Fibromyalgia:
Alala azụ iji igbe ikwu okwu dị n’okpuru ma ọ bụrụ n’ajụjụ ọ bụla.
(Anyị na-anwa ịza ozi niile na ajụjụ niile n'ime awa 24-48. Anyị nwekwara ike inyere gị aka ịkọwa azịza MRI na ihe ndị yiri ya. Ma ọ bụghị ya, nweere onwe gị ịkpọ ndị enyi gị na ndị ezinụlọ gị ka ha nwee mmasị na ibe Facebook anyị - nke a na-emelite kwa oge na ezigbo ndụmọdụ ahụike, omume na nkọwa nke nchoputa.)
Elsa ekwu, sị:
Ọ dị onye ọ bụla nyochara ihe mere ọtụtụ ndị inyom dị ime na-ekwu na ihe mgbaàmà nke Fibromyalgia fọrọ nke nta ka ọ laa mgbe ha dị ime na mgbe a na-enye ya ara zuru oke? Ọ ga-amasị m ịtụrụ ime ọnwa 5 n'afọ ọzọ ..?
Hilde Teigen ekwu, sị:
Ahụkwara m nke a mgbe m dị ime. Ọ ga-amasị m ịtụrụ ime na-adịgide adịgide ☺️
Katrine ekwu, sị:
Ndewo Elsa. Azịza ntakịrị oge, mana homonụ nke anyị bụ nwanyị na-emepụta n'oge ime na-ebelata mgbu. Agara m na hormone hcg afọ ole na ole gara aga wee nweta enyemaka mgbu na ume dị ukwuu. Mba ọzọ, a na-eme nchọpụta na hcg dị ka nkwadebe na-ebelata mgbu, ma nke a abụghị ihe a na-eji na Norway.
Elisabeth ekwu, sị:
Ndewo nsogbu na fibromyalgia, obere metabolism na endometriosis, enwere njikọ n'etiti atọ ndị a? Enwere m prolapse na azụ azụ, enwetara m ya ozugbo m wepụrụ ọkpụkpụ ọdụ. M na-alụ ọgụ ruo ọtụtụ afọ na lumbago na-eche na mgbatị ahụ fọrọ nke nta ka m na-echegbu onwe m ebe ọ bụ na m na-afụ ụfụ ma emesịa.
Foto Mr nke e sere ọtụtụ afọ gara aga gosiri na ọ na-eyi uwe na nkwojiaka. My chiropractor na acupuncturist m ejirila nwayọọ nwayọọ na-eche ọtụtụ oge na ha na-eche na m nwere hernia, ma ọ dịghị emetụta ule m mere afọ ole na ole gara aga - gịnị ka ị chere na m nwere ike ịchọ nyocha? O siri ike ịnụ ụtọ ndụ na oke mgbu kwa ụbọchị.
Ihe ruru 30% nke ndị nwere obere metabolism na-achọpụtakwa fibromyalgia - yabụ enwere njikọ ụfọdụ, mana aghọtabeghị njikọ a nke ọma.
1) Ị dee na i wepụrụ ọkpụkpụ ọdụ?! Kedu ihe ị chere?
2) Kedu mgbe ị nwetara mbelata azụ azụ? Ọ eweghachila kemgbe mpụta mbụ?
3) Ị nwala ọzụzụ omenala? Eziokwu ahụ na ọ na-ewute uru ahụ bụ nanị ihe ịrịba ama na uru ahụ adịghị ike maka ibu ahụ - mgbe ahụ mgbe ị na-eguzo ma na-eje ije na ndụ kwa ụbọchị, ị na-enwetakwa ihe mgbu n'ihi nke a (gụnyere lumbago). Nanị ụzọ ị ga-esi zere mgbu azụ dị ala bụ na akwara nkwado dị ike karịa ibu - ya mere, ebe a, ị ga-achọ ụdị mmega ahụ emegharị emegharị ka ị na-eji nwayọọ nwayọọ dị ike. Malite na obere ike ma gbasie elu. Ọ ga-ewe ọtụtụ ọnwa tupu ị jisie ike wulite onwe gị ruo n'ọkwa dị mma.
Biko gụọ azịza gị. Daalụ tupu.
Ellen-Marie Holgersen ekwu, sị:
Nnyocha e mere na ndị nwere fibromyalgia ọ na-emetụtakwa ndị nwere ọrịa mgbu na-adịghị ala ala? Mgbe ahụ, m na-ekwu nyocha nke na-egosi njehie njikọ na ụbụrụ na ihe mgbu na-akpata mmetụta na ndị ọrịa fibromyalgia.
Nicole v / vondt.net ekwu, sị:
Ọmụmụ ihe a na-ekwu ihe ọ bụla banyere ya - ya mere, ọ dị mwute ikwu na anyị amaghị.
Nwee ọmarịcha ụbọchị.
Bente M ekwu, sị:
Ndewo, ahụrụ m ihe a ugbu a. Enwere m ajụjụ na-ewute ọtụtụ mmadụ. Gịnị mere anyị na-echefu ihe… obere oge ncheta .. e nwere ọtụtụ ndị na-alụ ọgụ na ya. Gịnị mere anyị na-echefu okwu? gịnị kpatara na a naghị enyocha anyị n'ụbụrụ ma ọ bụ n'azụ? A ghaghị igosi ya ebe. Mama enweela Fibro kemgbe ọtụtụ afọ ma na-agbasi mbọ ike na ebe nchekwa ha anwalela ya ugbu a. Mgbe ahụ, m na-eche na ndị niile nwere Fibromyalgia nwere otu ihe ahụ. Ọrịa a na-atụ m egwu.
Jon ekwu, sị:
Ee, enwere m ya na nne m nke 86 nwekwara ya. Ọ na-ewekarị iwe mgbe ụfọdụ, mana ọ na-eji ntakịrị ọchị ọ na-aga nke ọma. 😉
Smuna ekwu, sị:
Nchegbu / oxidative, mbufụt na-adịghị ala ala na ụra adịghị mma nwere ike imetụta ụbụrụ ụbụrụ. Mgbe ọ na-abịa ihi ụra, mmadụ nwere ike ihi ụra abalị dum, ma ọ ka na-enweghi ezigbo ụra miri emi dị mkpa maka ncheta na itinye uche.
Lolita ekwu, sị:
Ihe a niile bụ eziokwu. Agarala m ọtụtụ ndị dọkịta na-ahụ maka ahụ ike, ọ nweghịkwa onye chọrọ ịhịa aka n'ahụ nke nwere ike ime ka ahụ m siri ike kwụsị. Ha ga-enye ozi maka ọzụzụ naanị.
Lisa ekwu, sị:
Ndewo. Amachaghị ebe ị ga-ajụ ajụjụ a - yabụ m na-agbalị ebe a. Na-arụ ọrụ na ụlọ akwụkwọ ọta akara ma nwee olu mgbu ihe dị ka otu afọ. Malite na ọrịa kristal (ka dọkịta ahụ kwuru - chiropractor kwuru na ọ sitere n'olu). Anọ m na ezumike ọrịa ugbu a kemgbe ngwụcha Jenụwarị. Gaa na chiropractor, ma chere na ọ nyeere aka n'ebe ahụ na mgbe ahụ - ugbu a na-aga physio. Agara m MRI na X-ray. Ihe si na ya pụta bụ: Mmụba diski diski na ọkwa C1 / C5 na C6 / C6, gbakwunyere Modic ụdị 7 na-emeghachi omume n'akụkụ aka ekpe yana mmụba dị ntakịrị diski na nnukwu nkwụnye ego na-enweghị mkpuchi nke na-enye obere stenoses foramen maka ekpe C1 na C6. mgbọrọgwụ. Enweghị stenosis spinal ma ọ bụ myelomalasia. Na-agbakwụnye na enwere m ọtụtụ ihe mgbu n'isi. (Na mgbe ahụ, ọ na-akasị banyere ya slamming nke ọma mgbe m na-akwagharị na-eje ije). Ọ nọ na physio ụnyaahụ. O kwughị ọtụtụ ihe banyere nsonaazụ ya, mana o kwuru na m kwesịrị ịgbatị olu m ntakịrị ma nọgide na-agba ọsọ (nke na-aga nke ọma). O kwukwara na egosipụtala Modic, mana ndị nyocha ahụ ekwetaghị na a ga-eji ọgwụ nje mee ihe ma ọ bụ na ha agaghị eji. Ihe m na-eche bụ Modic-agụọla ntakịrị gbasara ya ma a bịa n'ọkpụkpụ lumbar - ọ bụ otu ihe ahụ n'olu? Rịba ama na ụfọdụ ndị gbara m gburugburu adịghị eche nnọọ na m nwere olu na-egbu m mgbu nakwa na ikekwe m kwesịrị imekwu ihe. Enwere m ezigbo ụbọchị, mana ọ na-ewe obere oge tupu ọ na-ewute ya ọzọ. Ụdị Modic ọ bụ ihe nwere ike ịla n'iyi? Ọ na-atụ m ụjọ ịnọrọ ezumike ọrịa ogologo oge.